Funda Uphi IsiGaba soVavanyo besiGaba esiPhezulu esikufunayo kwiKholeji
Yiyiphi amanqaku eSAT Literature Test Test oyifunayo ukuba ungene kwikholejini eliphezulu okanye ukufumana iitaliti yekholeji iyahluka ukusuka kwisikolo ukuya esikolweni. Amanqaku athetha ngo-2016 yayiyi-599, ephakamileyo kakhulu kunamanqaku athetha kwicandelo jikelele lokufunda i-SAT.
Itafile ephantsi kwephepha ibonisa ukulungelelaniswa phakathi kwamanqaku eSAT Literature kunye nesigaba se-percentile sabafundi abathatha uvavanyo. Ngokomzekelo, abafundi abangama-61 bafumana amanqaku angama-660 okanye angaphantsi kwesi vavanyo.
Nangona kungekho sixhobo esinjalo kuluhlu lweZibhalo, ungasebenzisa le calculator yamahhala esuka eKappex ukuze ufunde amathuba akho okufumana iikholeji ezithile ezisekelwe kwi-GPA yakho kunye nezikolo eziqhelekileyo ze-SAT.
I-SAT Iziphumo zovavanyo zoMxholo azifanelanga nezikolo eziqhelekileyo ze-SAT kuba iimvavanyo zezifundo zithathwa njengepesenti ephakamileyo yabafundi abaphumelele kunokuba yi-SAT. Nangona inani elikhulu leekholeji neeyunivesithi zifuna izikolo ze-SAT okanye ze-ACT, izikolo ezininzi ezikhethekileyo nezikhethileyo zifuna izikolo ze-SAT zovavanyo lweSihloko. Ngenxa yoko, amanqaku aphakathi kwee-SAT zezifundo zoMxholo ziphezulu kakhulu kunezo ze-SAT eziqhelekileyo. Kuvavanyo lwe-SAT Literature Test, qhathanisa, umzekelo, amanqaku athile ka-599 kwi-Testing Subject Subject Test with a score of about 500 kwi-SAT rhoqo yokufunda ebalulekileyo. Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba amanqaku athile kwi-Testing subject subject has been up up in recent years - kungaphezu kwama-30 amanqaku aphakamileyo kuneeminyaka emibini edlulileyo.
Iikholeji ezininzi azivakalisi i-SAT ye-Subject Test Test admission data. Nangona kunjalo, kwiikholeji eziphakamileyo uya kuba neenqaku kuma-700s. Nazi ezinye iikholeji ezimbalwa ezithethayo kwiimvavanyo zeSAT:
Ikholeji yaseMidbury : "Sijwayele ukubona ... I-SAT IIluluhlu ukusuka kwi-low-middle to 700s" (ukusuka kwi-FAQ yokungena kwi-Middlebury)
Ikholeji yaseWilliams : Kwinqanaba le-2021, ama-51 eepesenti abafundi bafumana phakathi kwe-750 no-800 ukufundwa nokubhala ngokusekelwe kubungqina; Amaphesenti angama-31 athola phakathi ko-690 no-740; Ipesenti ezili-15 zafumana phakathi kwama-630 no-680; Iipesenti ezi-3 zafumana ngaphantsi kwe-630 (ukusuka kwiklasi yakwaWilliam yeprofayile ye-2021)
Njengoko le nkcukacha echanekileyo ibonisa, isicelo esinamandla siza kuba nezikolo ze-SAT zoVavanyo lweSihloko kwi-700s. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba zonke izikolo eziphakamileyo zinemigaqo yokungeniswa ngokupheleleyo , kwaye amandla amaninzi kwezinye iindawo angenza amanqaku angaphantsi kovavanyo.
Kwimeko yekhredithi kunye nokufakwa kwiNcwadi, uvavanyo lweSat Literature Test is rarely used. Ezinye iikholeji ziya kuyisebenzisa ukuvavanya ukulungelelaniswa kwabafundi bekhaya kwikolishi, kodwa ukufakwa kweemviwo ze-AP zisetyenziswe kaninzi.
Umthombo wedatha kwitshati engezansi: iwebhusayithi yeBhodi yeKholeji.
Izifundo ze-SAT Izifundo zoVavanyo zezifundo kunye namaPerentienti
I-SAT Literature Score Test Score Percentile
Ngokubanzi, iimviwo eziphambili ze-Placement zibhetele kunezovavanyo ze-SAT ekuhloliseni ukulungelelaniswa komfundi wesifundo kwiikholeji. Nangona kunjalo, i-AP kunye ne-SAT inokudlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yakho yesicelo ngokubonisa ubuchule bakho bendawo yesifundo.
Nangona i-"A" kwisikolo seencwadi eziphakamileyo zezifundo kunokuthetha into eyahlukileyo kwizikolo eziphakamileyo eziphakamileyo, i-750 kwisifundo se-SAT sifundo ngokuqinisekileyo sibonisa ukuba umfaki-sicelo unolwazi lweengcamango kunye neengcamango ezihambelana nokufunda.